FBI-da oo shaacisay warbixin la xiriirta Hillary Clinton – idalenews.com
Washington(INO)- Hay’adda Sirdoonka dalka Mareykanka oo in muddo ah baaritaan ku haysay wararka sheegaya in Hillary Clinton ay isticmaashay Emailkeeda gaarka ah xilligii ay haysay Xilka Xoghayaha Arimaha Dibada Mareykanka ayaa waxa ay soo saareen warbixin la xiriirta amuurahaasi.
Eeda ku aadan in Hillary Clinton Emailadeeda gaarka ah u isticmaashay shaqada Qaranka ayaa waxa ay fursad u noqotay Musharaxiinta kula loolamaya xilka Madaxtinimada dalka Mareykanka inay aad ugu dhaleeceeyaan Haweenaydaan si kalsoonida Bulshada ay ku qabto ay hoos ugu dhacdo.
Madaxa Hay’adda Sirdoonka dalka Mareykanka James Comey ayaa cadeeyay inaysan jirin dambi ay gashay Hillary Clinton oo ku aadan isticmaalka Emailadeeda gaarka ah.
James Comey ayaa sheegay kaliya Hillary Clinton inay muujisay taxadar la’aan balse aanay muuqan dambi weyn oo Qaranka ay ka gashay.
Hillary Clinton ayaa ah hada Musharaxiinta ugu cad cad ee loolanka adag ugu jira Madaxtinimada dalka Mareykanka oo dhawaan lagu wado in dalkaasi ay Doorasho ka dhacdo, xilli hada ay socoto ololaha xoogan ee Musharaxiinta wadaan.
Hadalka ka soo baxay FBI-da Mareykanka ayaa niyad jab weyn wuxuu ku ridayaa Musharax Donald Trump oo xilliyada uu dhaleeceynaayo Clinton soo hadal qaadi jiray in Qaranka ay meel uga dhacday, maadaama Emailadeeda gaarka ah shaqada Qaranka u isticmaashay, waa sida uu ku eedeyn jiray.
Warkaan ka soo baxay Sirdoonka Mareykanka ayaa ku soo aadaya, iyadoo Doorashada Madaxtinimada dalka Mareykanka ay ka harsan tahay waxyar kaliya.